FreedomPop na-arụ ọrụ na gị onwe gị na gam akporo ama | Akụkọ akụrụngwa
FreedomPop na-arụ ọrụ na gị onwe gị gam akporo ama
Nnwere onwePop, maka ndị na-amaghị ya, bụ ụlọ ọrụ ekwentị nke na-enye ohere ịme okwu, na-ekpori ndụ njikọ data mkpanaka yana ọtụtụ ihe karịa n'efu. O doro anya na ọ ga-ekwe omume ịdenye ọnụego ịkwụ ụgwọ na ọtụtụ arụmọrụ ndị ọzọ, n'eziokwu ha na-agbanwe n'etiti mkpuchi Oroma na Yoigo na Spain. Agbanyeghị, ọ dị ka FreedomPop achọghị ịkwụsị uto ya ebe a, ma na-achọ ịnye ụzọ ọzọ karịa ịnye naanị ọrụ. FreedomPop na-arụ ọrụ na ịme igwe nke ya nke nwere sistemụ arụmọrụ enweghị ike ịbụ ndị ọzọ karịa Android. Ka anyị leba anya n’ihe njirimara ya ga-abụ.
N'ikwekọ n'ụkpụrụ azụmaahịa ndị ọzọ, FreedomPop na-arụ ọrụ na ngwaọrụ nke ga - abụ "obere ọnụ", yabụ ọ nwere ike ịmasị ọtụtụ ndị ọrụ ya. Agbanyeghị, ụfọdụ njirimara ya bụ ihe ịtụnanya n'ezie ịtụle ego ọ na-ebuli. Banyere ogo ihuenyo ahụ, nke a na-akpọ FreedomPop V7 ga-enwe ogwe 5-inchs na teknụzụ IPS. Maka nchekwa anyị ga-ahụ ngụkọta nke 16GB, yana ohere ịgbakwunye kaadi microSD iji nọgide na-etinye ngwa.
Maka onye nhazi, a Snapdragon 210 Ezigbo njedebe, dị ka sistemụ arụmọrụ, isi ike ya ọzọ bụ na ọ ga-enye gam akporo 6.0 Marshmallow na njirimara Dual-SIM.
Na igwefoto anyị ga-enwe 13 MP ihe mmetụta nke azụ nke anyị amaghị onye mepụtara ya, yana n'ihu 5 MP maka ụfọdụ selfies ọnụ. Ihe kachasị mma na enweghị mgbagha bụ ọnụahịa, gụnyere kaadi FreedomPop, na blọọgụ ha kwuputara na ọ ga-efu ihe ruru 57 Pound, ihe ya na ihe dị ka euro 65. Obi abụọ adịghị ya na ọnụ ọnụ ala dị oke ọnụ ala n'ihi na ọ dị obere maka ama ama ga-arụ ọrụ maka ndị ọrụ na-amalite ma achọghị ịmefu oke. Nsogbu nwere ike ịbụ RAM, nke anyị na-amaghị ikike ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » FreedomPop na-arụ ọrụ na gị onwe gị gam akporo ama
PlayStation 4.50 femụwe 4 nwere ike na-abịa nnọọ
Akụkọ Instagram na-enye anyị ala akwụkwọ mmado iji chọọ karịa na Snapchat